SHALAY IYO MUSTAQBALKA
Hadaba ma ahan in taariikhdaada hore ee Mugdiga ahayd ay dhibaato u keento ama saamayn ku yeelato rajadaada Mustaqbalka, maxaa yeelay inta ku sugaysa iyo inta aad soo qabatay xisaab ahaan mar walba waxaa badan inta ku sugaysa nolosha, sidaa darteed mustaqbalka waa wax ku sugaya, taariikhdaada shalayna way ahayd oo ma ahan mid kugu soo laabanaysa.
Hadaba wax walba xaqooda sii, noloshaadana ugu noolow hab waafaqsan Dulqaad, Naxariis, Caddaalad iyo Taxaddar.
Si aad u garato qiimahaaga nolosha waa in taariikhdaada hore ee Mugdiga ah shalaytadeeda aad yaraysaa, waqti xaadirkaagana aad kula noolaataa si kalsooni ku jirto adiga oo dib u eegayn wixii kaa dhacay shalay cabsina aadan ka qabin qaladaadkaagi hore ee murugta ku dhaxalsiiyay, intaas waxaa sii dheer u diyaar garow aad u diyaar garowdaa mustaqbalkaaga dambe cabis la’aan.
HA IS CAJABIN
Waydiimaha ku saabsan halka ugu wanaagsan ee la ahaado Aakhiro iyo adduun ayaa batay, qof walbana si ayuu ku cabiray jawaabta su’aashaas, iyada oo qof walba iimaankiisa iyo garaadkiisa uu kaashanayo, dadka su’aalahaas la waydiiyayna Bani aadam ayay wada ahaayeen oo looma eegin Issirkooda iyo diintooda, maadaama su’aashu ay daboolaysay dhamaan wax ku saabsan Aadanaha, qof walbana si ayuu u qeexay, halkan kuma soo koobi karo dhamaantood, balse, jawaabta iila qiimaha badnayd ayaa noqotay sidan.
Halka la ahaado dunida waxaa ugu macaan badan in qof maankiisa aad noqotaa, oo mar walba waxa uu ka fakaro aad adiga tahay, taas oo laga eegay dhanka Dunida.
Labada qof ee jawaabtaas kala baxshay waxay wax ku cabirayeen hankooda iyo qiimaha ay markaa is lahaayeen waad u baahantahay.
Halka la ahaado dunida waxaa ugu macaan badan halka ay daacadnimada hareesay
Waxaasaa kaa jacayl ah
Wuxuu waydiiyay gacalisadiisa inta ay jeceshahay isaga, bal in ka badan in ay nafteeda jeceshahay?
Waxay ugu jawaabtay Gacaliyo “maxaan jeclaadaa? wax nool ayaa la jeclaadaa, wax jiro ayaa wax kala lala bar bar dhigaa, natayda maxaan kaa jeclaadaa? maba jirtee, miyaadan ogayn in naftayda ay waa hore dunida ka hayaantay? waa hore ayaan dhintay, ma ihi qof ku nool dunidayda, waxaan ku noolahay dunidaada oo kaliya.
Miyaadan ogayn in aan waa hore kala qarsonnay dunida aad igu sheegayso? miyaadan ogayn in xushmadda iyo ogaashiyaha aad naftayda ku tuhmayso waa hore ay ii ahayd markii aan ku noolaa dunidayda? Dunida aan hadda ku noolahay waa taada oo kaliya, ma ahan duni kale, adiga oo kaliya ayaa ii muuqda , waan hilmaamay wax walba oo aan lihi u lahaa, waxaan xusuusanahay oo kaliya in aan milkiyaddaada ahay, wax aan barto ma jirto, waxbarashadayda waa adiga, Mutacalim ayay naftayda ku noqtay aqoontaada.
Maalin iyo habeen waxa aan ka fakaro, sakan walba qalibgayga waxa uu la gad gadoomo waa dareenkaaga, waa hore ayaan lumay, ma ogi halka aan ka imid, balse halka aan joogo waan aqaan, igumana jiro safar kale oo aan ku baadi goobayo wax iga maqan, waxaan aaminay in wax walba oo iga maqnaa ay agtaada ii yaalaan ama aad adiga ii tahay!
Waxaa luntay awooddayda oo dhan, balse awoodda uu I siiyo dareenkaaga ayaa ah midda ay quutaan Xubnaha Dareemada kulul kacsha ee jirkayga, xillliga aan doonayo in aan awood yeesho waa xiliga aan xusuustayda dib ugu celsho jacaylkaaga, xilligaas oo aan aminsanahay in cid iga awood badni aysan jirin.
Jacaylka naftayda waa jacaylka aan adiga ku jeclahay.
Jacaylka aan adiga ku jeclahayna waa midka naftayda aan jeclahay
Kala duwnaashaha dhanka Fakarka ah mar walba wuu jirayaa, maxaa yeelay labada qof sida ay laba qof u kala yihiin, qaab kala duwana ay nolosha usoo arkeen, uguna soo bar baareen ayuu mar walba u kala duwanaanayaa fakarkooda.
Balse waxaa jirta Dan guud oo midaysa labada qof, taas oo uu qof walba baahi gooni ah u qabo ugana baahan yahay wehelkiisa kale, Baahida aan ka hadlayo ee labada qofood isaga baahan yihiin ma ahan oo kaliya midda ku timaada Jinsiga, ee waa mid dhinacyo badan oo kale ka timaada.
Si xiriirku u noqdo mid guulaysta oo gaamura micnaha saldhig wanaagsan yeesha, waxaa wanaagsan in la dagsado Qawaaniin labad qof kala xaddidaysa, qof walbana waxa uu xaq u leeyahay ama loogu leeyahay garansiin karta, si looga maarmo isku dhac iyo isku xad gudub dhex mara labada qof ee nolosha shirkada ku ah.
2 waa in qof walba qofka kale dareensiiyaa in uu jecelyahay baahi badana loo qabo, taas haddii ay dhacdo hubaal in hamuunta la isku qabo ay sii balaaranayso, qofka marka uu dareemo in loo baahan yahay ama la jecelyahay, markaas waxaa galaya Daganaan qalbi, qiimaha iyo kalsoonida uu naftiisa kusii qabana waa mid sii balaarata, taas oo marka dambe dhaxalsiisa in qofku marka uu gurigiisa kusoo hiiranayo uu mar walba farxad dareemo.
3 Xushmadda, is addeecidda, is dhagaysiga, is qiimaynta iyo is marxabaynta ku salaysan jacaylka waa mid sii baahida kalgacalka labada qof isku qabaan, waxaa kaloo taas sii dheer in qof walba qofka kale ka ilaalsho wax walba oo keeni kara dhaawac qalbi, intaas marka lagu guulaysto waxaa suura galaysa in xiriirku uu sii yeesho xiddido adag oo goyntooda aysan fududayn.